Xiddigaha Man United ee Pogba, Lindelof & Shaw oo shaki laga gelinayo kulanka Burnley… (Miyey diyaar u noqon doonaan inay wajahaan Liverpool?) – Gool FM
Xiddigaha Man United ee Pogba, Lindelof & Shaw oo shaki laga gelinayo kulanka Burnley… (Miyey diyaar u noqon doonaan inay wajahaan Liverpool?)
Haaruun January 11, 2021
(Manchester) 11 Jan 2021. Xiddigaha Kooxda Manchester United ee Pogba, Lindelof & Shaw ayaa shaki laga gelinayaa kulanka ay u safrayaan Burnley, balse waxaa la isweydiinayaa inay diyaar u noqon doonaan iyo inkale inay wajahaan Liverpool.
Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku rajo weyn in Paul Pogba, Victor Lindelof iyo Luke Shaw ay taam u noqon doonaan inay Axadda soo aaddan wajahaan Liverpool, laakiin waxa uu qiray in saddexdaan laacib ay seegi karaan kulanka Talaadada ay ka horjeedaan Burnley.
Man Utd ayaa 1-0 kaga badisay Watford kulankii ka dhacay garoonka Old Trafford Sabtidii ee wareegga saddexdaad ee FA Cup-ka, laakiin Pogba, Lindelof iyo Shaw kama aysan soo muuqan shaxdii kulankaas.
Solskjaer ayaa xaqiijiyey kaddib kulankan in saddexdaan ciyaaaryahan ay ku maqnaayeen dhaawacyo, waxaana uu haatan shaki galiyay taam ahaanshahooda ka hor todobaad muhiim u ah kooxdiisa ee horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa hoggaanka u qaban doonta horyaalka haddii ay Burnley ka soo helaan Talaadada natiijo aan guuldarro ahayn, waxaana kulankooda xiga ay u safri doonaan kooxda ay ku xafiiltamayaan hoggaanka horyaalka ee Liverpool iyagoo ku booqan doona garoonka Anfield.
“Sidaas ayaan rajaynayaa, waxaan rajaynayaa in dhammaantood ay Liverpool ciyaarayaan” ayuu yiri Macallin Solskjaer.
“Ma hubo inay ka dhigi doonaan safashadooda midka Burnley.
“Laakiin tababarka fudud waa Axadda, kaddib waan arki doonnaa Isniinta.”
Waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo Eric Bailly, kaasoo lagu qasbay inuu garoonka ka baxo wax yar ka hor qeybtii hore kulankii Watford, isagoo Madaxa dhaawac ka soo gaaray, wuxuuna u baahan doonaa in la qiimeeyo xaaladdiisa ka hor kulanka ka dhacaya garoonka Turf Moor.
Kooxdii yarayd ee xalay guuldarrada kala kulantay Tottenham oo shaacisay inay iska diiday inay amaah ku qaadato Mesut Ozil
Cristiano Ronaldo oo xalay sameeyey Rikoodh iyo taariikh kale oo uusan weli gaarin Lionel Messi